Ukwamkelwa kwabo bonke oogxa bakho kwimigudu kunye negalelo lomsebenzi we-K-TEK, kunye nokukhuthaza unxibelelwano phakathi koogxa, ukomeleza unxibelelwano kunye nokumisa phakathi kwamaqela, ukomeleza ubuhlobo kunye nokwenza umanyano lweqela, i-K-TEK iququzelela rhoqo kwaye yenza imisebenzi eyahlukeneyo.
Kutshanje, Kwiholide yendabuko yaseTshayina - umnyhadala weMid-Autumn kunye noSuku lweSizwe, sikunye, sonke singabasebenzi kwisidlo sangokuhlwa, ngaxeshanye baninzi abadlala, njengokucula, ukungqungqa, ukudlala isiginkci njalo njalo.
Kwangelo xesha abasebenzi babalaseleyo nabaphathi benza intetho ephambili, omnye wabasebenzi uthe: "Ndisebenze iminyaka emithandathu eK-Tek, kuba inkampani ithathela ingqalelo ukulinywa kwesakhono, emsebenzini uqeqesho lusendaweni, luzabalazela ukugqibelela, mandibe nobuchwephesha ngakumbi nangakumbi, kunye nomgaqo-nkqubo wolawulo lomgangatho wenkampani, siyenza ngokungqongqo, yenziwe ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu, injongo yenkampani yinjongo yethu, sisebenza kunye ukwenza ikamva ".
Umphathi wethu jikelele intetho: "phantsi kwemizamo edibeneyo yamasebe ahlukeneyo, inkampani xa iyonke ijongene notshintsho olukhulu lwenzekile, yenze impumelelo eyonwabisayo, siphumeza ngokupheleleyo imo yolawulo ye5S, ukubila kwethu kwesivuno, silwela uvuyo, Imizamo yethu ihlawule, onke amanqaku, abasebenzi bokunciphisa ubulumko nokubila, apha, egameni lenkampani yam enkosi ngemizamo yakho!
Iinyanga ezili-10 zidlulile ngo-2020, nangona bephantsi kwempembelelo ye-coronavirus, amashishini amaninzi afumana ubunzima obukhulu, kodwa ishishini le-K-TEK lisakwazi ukugcina ubuqaqawuli bexesha lethu elidlulileyo, kungenxa yokuba besisoloko sibambelele "kwizinto ezijolise ebantwini, eziqhubekayo ezintsha , Umgangatho ophezulu kunye nokusebenza kakuhle, umgaqo wokuqala wabathengi, Ngezixhobo ezaneleyo zokuqhubekeka ngokuchanekileyo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, umgangatho wezinto ezichanekileyo unokuhlangabezana nemigangatho yemizi-mveliso yehlabathi. Iqela ngamandla, silusapho olunothando.
I-K-TEK lishishini elifanele intsebenziswano yakho, wamkelekile ukudibana sales@k-tekmachining.com Ifowuni: (+86) 0769-88459539